Ogaden News Agency (ONA) – Riyadh iyo Doxa oo xalay lagu qabtay shirar qaali ah
Riyadh iyo Doxa oo xalay lagu qabtay shirar qaali ah
Posted by ONA Admin	/ July 2, 2011
Shir balaadhan ayaa xalay lagu qabtay magaalada Riyaadh oo ay kasoo wada qayb galeen xubnaha jaaliyada Riyadh iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo wakiilka Bariga Dhexe u jooga JWXO mudane Sh. C/alaahi ciraaqi oo kormeer hawleed ku jooga ayaa xalay. Waxaa sidoo kale uu shir ay xubnaha ururka ka soo qaybgaleen lagu qabtay magaalada Doxa, halkaasuu uu kala qaybgalay halgame Maxamad A. Raabi oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda UK oo dhowr dal oy Qatar ka mid tahay mari doona.
Shirka Riyadh oo lagu furay aayadaha Quraanka ayaa waxaa wacdi diini ah ka jeediyay Sh. Mohamed Xaaji ku saabsan fadliga uu jahadka leeyahay iyo halganka ka socda Ogadeniya. Wacdigaa diiniga ah kadib waxaa hadalkii qaatay musuuliyiinta jaaliyada qaybo ka mid ah iyaga oo ku dheeraaday wax-qabadka jaaliyada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa arimaha la xidhiidha dhaqaalaha, dhaqanka iyo suugaanta halganka iyo dhamaanba tayada Jaaliyada.
Guddomiyaha jaaliyada Riyadh ayaa ka dib ku soo dhaweyay masuulka JWXO u jooga Bariga Dhexe Mudane Ciraaqi oo warbixin dheer ka siiyay jaaliyadda heerka uu marayo halganka iyo jahaadka ka socda Ogadenya isagoo dadkii madasha fadhiyay ka codsaday in loo huro naf iyo maalba. Khudbada Isu-duwaha Bariga Dhexe oo meelo badan taabatay ayuu xubnaha jaaliyadda faray inay ka digtoonaadaan shir qoolka gumaysigu uu ka maleegayo qurbaha iydoo uu sheegay in lagaga adkaaday gudaha, iyagoo doonaya hadda inay jaaliyadaha dibadda ku jaha-wareeriyaan dacaayado been ah oo aan jirin.
Shirka lagu qabtay magaaladda Doxa ayuu gudoomiyaha jaaliyadda halgame Faysal warbixin kooban ka siiyay martida la joogta xaaladda jaaliyadda isagoo isla waqtigaana ka warbixiyay halgame Maxamad Raabi doorkii uu ka soo qaatay jaaliyadaha Germany iyo UK oo uu hadda ku suganyahay. Warbixintaa ka dib ayuu halgame Raabi warbixin dheer siiyay xubnaha jaaliyadda Doxa isagoo ugu horeynba ka soo tabiyay salaam ay madaxda iyo jaaliyadda UK soo gaarsiiyeen Jaaliyadda Doxa. Ka dib wuxuu ka xogwaramay arimihii ugu dambeeyay ee jaaliyadaha Yurub ay qabteen iyo weerarkii uu gumaysiga ku soo qaaday jaalidaha bilihii la soo dhaafay iyo sida looga gacan sareeyay oo meel walba loogu qaraacay gumaysiga iyo beedhi-qaatayaashii la socday. Halgame Raabi wuxuu aad uga xogwaramay heerka ay jaaliyadaha iyo madaxda JWXO ka qaadanayaan hadda sidii loo soo celin lahaa ruuxdii Somaalinimo ee gumaysiga Itobiya uu aasay. Wuxuu ka xogwaramay shirkii ugu dambeeyay ee G/xigeenka uu ku qabtay London oo Soomali oo idil ay ka soo qayb gashay halkaasoo ay xubnihii ka socday jaaliyadaha Somaliyeed ee oday-dhaqameed iyo aqoonyahay iyo siyasiyiinba lahaa ay ballan ku qaadeen inay isgarab taagaan shacabka S.Ogadenya ee dulman isla marahaantaana ay meel uga soo wada jeestaan xoreynta Somaliya oo ay yidhaahdeen gumaysiga haysta Ogadenya umbaan Somaaliyana haysta.
Ugu dambayntii shirarkii xalay ka dhacay Riyadh iyo Doxa ayaa guulo ku dhamaaday.